Mini danpon laser, Shanghai green modul, Laser modul - Jiabei
Aspheric Collimator Glass Lens maka Diode
banyere anyị banyere anyị
Shanghai JIABEI ngwá ụlọ ọrụ ike na 2003, bụ ihe ike enterprise nke nnyocha na mmepe, mmepụta na ire nke laser ngwaahịa maka ala nnyocha e mere na ụlọ ọrụ. Anyị na ngwaahịa na-agụnye laser etoju, laser modul, laser pointers na ụfọdụ ndị ọzọ yiri ngwa na-ewu. Dị na oge a na obodo nke Shanghai bụ nke na-otu n'ime ndị kasị mma na akpa obodo China.
Featured ngwaahịa Featured ngwaahịa
VH-3D Green 12 Lines 360 Celsius Vetikal & Horiz ...
VH-30G Mini Green One Vetikal Line
VH-30R Mini Red One Vetikal Line
ọhụrụ ozi ọma ọhụrụ ozi ọma
Gịnị bụ ụdị nke mmụọ larịị
1 .. nhazi ọkwa dị ka na-arụ ọrụ ụkpụrụ (1) Mechanical spirit larịị Mechanical larịị nwere ike kere atọ ụdị: mmanya larịị (a makwaara dị ka fitter larịị), etiti larịị na otu larịị. Ha na-egosipụta site larịị afụ, otú n'ibu larịị na-akpọ larịị larịị ma ọ bụ afụ ụdị. Spirit larịị. Warara spirit larịị bụ a akụkụ anọ larịị e ji atụ ngwá na a isi ji atụ elu, na larịị afụ bụ ofu ma ọ bụ nwere ike gbanwere ikwu na isi ji atụ surfa ...
Olee otú mmụọ larịị-arụ ọrụ
Larịị tube nke mmụọ larịị ka nke iko. The n'ime mgbidi nke larịị tube bụ a curved elu na a ụfọdụ okirikiri nke curvature. The tube nwere mmiri mmiri. Mgbe larịị weturu, na egosipụta na larịị tube aga na njedebe nke larịị iji chọpụta larịị ọnọdụ. The ibu okirikiri nke curvature nke dị n'ime mgbidi nke spirit larịị, na elu mkpebi, na nta na okirikiri nke curvature, na Lower mkpebi. Ya mere, na okirikiri nke curvature nke s ...
Gịnị bụ nnyocha ụzọ nke larịị?
A larịị bụ a nkịtị e ji atụ ngwá ọrụ ji atụ obere angles. Na n'ibu ụlọ ọrụ na ngwá n'ichepụta, ọ na-eji tụọ nchepụta n'akuku ikwu na kehoraizin ọnọdụ, ndị planeness na straightness nke ndu okporo ígwè nke igwe ngwá ọrụ ngwá, ndị kwụ ọnọdụ na vetikal ọnọdụ nke akụrụngwa echichi, wdg Next, ihe m ga kọwaa ihe ọmụma nke ozo na zuru ezu. 1. A nkenke iwebata ka larịị A larịị bụ a nkịtị e ji atụ ngwá ọrụ ji atụ obere ...
erite , Total Station , 360 Rotary Laser Ọkwa Green Doo , tripod , Wall mgbodo , Laser Light ,